नायक राजेश हमालको ‘महानायक’ उपाधिमाथि किन उठ्छ प्रश्न ?
Homeमनोरञ्जननायक राजेश हमालको ‘महानायक’ उपाधिमाथि किन उठ्छ प्रश्न ?
काठमाडौ । नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा नायक राजेश हमालको क्रेज लोभलाग्दो छ । नायक हमालले अभिनय गरेका चलचित्र पछिल्लो समयमा असफल हुन थालेपनि केही बर्ष अगाडिसम्म उनको टाउको पोष्टरमा राख्दासम्म पनि दर्शक हलमा आउथ्य ।
दीपा भन्दा अगाडि पनि केही कलाकारले राजेश हमाललाई दिइएको यो उप–नाममा असन्तुष्टी व्यक्त गरेका थिए ।-अनलाइन खबर
बेहुलाको मृ त्यु, विवाहमा सरिक भएका ९५ पाहुना कोरोनाद्वारा संक्रमित